Abbootiin qabeenyaa marsariitii viidiyoo 'haaloo bahuf gadhiifamaniin buufatu’ - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Viidiyoon jaalalleewwan duraanii waggoota muraasa dura waraabame intarneetii gubbaa gadhiifamu rakkoo guddaa qaba
Abbotiin qabeenyaa marsariitii viidiyoo saal-qunnamtii intarneetii gubbaa gadhiisu, 'Poornihaab' jedhamu qaban, viidiyoowwan michuuwwan haaloo wal bahuf itti kennan gadi dhiisuun bu'aa argachaa akka jiran BBC'tti himame.
Dhaabbileen kuni erguma viidiyoon suni abbicha rakkoo keessa akka seensisu gabaafamellee irraa hin balleessan jedhame.
Kan Afaan Ingiliziin 'Riveenj Poorn' jedhamu viidiyoo ykn suuraa qaama ykn walqunnamtii saalaa nama tokko eeyyama isaa/ishee malee akka maqaan baduuf ykn arrabsoon irra gahuuf yeroo hedduu intarneeta gubbaa gadhiifamudha.
'Walqunnamtii saalaa madda galii gochuun duudhaa nama Itoophiyaa miti'
Viidiyoon yookiin suuraan akkanaa jaalallee duraaniin gadhiifamuu danda'a. Yookiin immoo nama ol kaa'ate jalaa ni hatama.
Dubartiin ''Soofii'', jedhamtu viidiyoon ishee intarneeta gubbaa gadhiifamee namoota kuma dhibba hedduun daawwatamee jennaan rakkoo akka seeente himte.
Gareen duula gaggeessuufi maqaa #NotYourPorn jedhun socho'aa jiru akka jedhetti viidiyoon qabiyyee akkanaa qabu kanneen marsariitii kana qabaniif qarshii hedduu fida.
Dhaabbatni viidiyoo akkanaa gadhiisu Poornihaab, wanta akkanaa ''nan balaaleffadha,'' jedha.
Viidiyoon ishee gadhiifame jennaan dubartii of ajjeefte
Dabalataanis, imaammata farra viidiyoo namootaa gadhiisan akka qaban himu.
Akka dhaabbatichi jedhetti, Soofiin akka viidiyoon kuni intarneeta gubbaa badu gaafachuu ishee ergaan dhaabbatichatti ergame akka hin jirre hima.
Garuu, erga walitti dhufani as rakkoo kana furuuf carraaqaa akka jiran beeksiseera.
'Maqaan na bade'
Soofiin maqaa ishee dhugaa miti. Sagantaa BBC Viktooriyaa Derbishaayerif akka himtetti ji'oota 18 dura maatii ishee waliin qe'eerraa fagaattee osoo jirtu namoonni hedduun bilbiluufi eegalan.
Viidiyoo ishee marsariitii ykn websaayitii addunyaa guddicha waa'ee saal-qunnamtii baasu, Poornihaab, irratti kan arge michuu obboleettii isheeti.
Goodayyaa suuraa Erga takkaa intarneetii gubbaa gadhiifamee booda to'achun nama dhiba
Viidiyoowwan ishee jaha keessaa tokko toora viidiyoowwan baay'inaan daawwataman 10 keessa tokko ta'e ture. Kuma dhibba hedduun daawwatame.
Kana booda, ''Nan rifadhe, maqaan na bade, nan saaxilame,'' jechuun dubbatti.
Viidiyoowwan akkanaa hangam intarneetii gubbaa barbaadamu?
Soofiin michuu ishee duraanii waliin viidiyoo jaha kan waraabdee qabdi. Waggoota dheeraa dura adda bahanis viidiyoo kana namni intarneeta gubbaa akka gadhiisu eyyama hin kennine.
Erga viidiyoon kuni gadhiifame bartee torban tokko keessatti dhaabbatni Poornihaab balleessee ture.
Ta'us, viidiyoowwan jaha Poornihaab irratti gadhiifamanirraa namni tokko kilippoota 100 irraa kan hojjete yoo ta'u, lammata marsariitii kana irratti akka maxxanfaman ta'e.
Lammata dhaabbatichatti gaafa gabaastu garuu ''na gargaaruu hin dandeenye'' jetti.
Dhaabbata biraa kana ishee gargaaruu waliin walitti dhuftus innillee deebii deebisuu akka dhabe himti.
Dhimma ishees gara poolisii geessiteetti. Ta'us, hanga yoonaa namni himatame hin jiru.
Dhiibbaa fiilmiin 'porn' qabu dhiiramoo shamarran irratti hammaata?
Garee duula gaggeessu, #NotYourPorn, irraa Keet Ayisaak akka jettetti viidiyoon haaloo bahuf gadhiifamu kuni dhaabbata Poornihaabin maqaa namoota ogummaa viidiyoo hin qabneefi mana keessatti waraabame jedhamu kennamaaf.
Kunimmoo jechoota intarneeta irratti baay'ee barbaadamani dha. Kanneen beeksisa fidanis kan hawwatu kana jetti.
'Rakkoo maatiirra gahe'
Yeroo Soofiin viidiyoon kuni intarneeta gubbaa gadhiifamu barte sana jaalallee biraa qabdi turte. Wanti gadhiifame kunis jaalalleewwan lamaan amma waliin jiran irrattis yaadoo uumeera.
Viidiyoo gad - lakkifamen hiriyyoonni michuu ishee itti qoosaa akka jiran himti.
Soofiin intala durbaa kan qabdu yoo ta'u ergasii 'namuma biraa taate' jechuun himti.
Pirezidantii Itti - aanaan Poornihaab Kuuri Piraayis akka jedhanitti : ''Viidiyoon Poornihaab irratti gadhiifamuufi hojimaata keenya faallessu akkuma dhageenyen balleessina. Kuni, isa eyyama malee gadhiifames dabalata,'' jedhuun falmu.
Dhaabbati sadaffaa biraa viidiyoon kuni gaafa lammata gadhiifamu to'atulle akka fayyadaman himu.
Fiilmiin saalqunnamtiin ammallee interneetii fayyadamuun dursaa jiraa?
Viidiyoon qunnamtii saalaa attamiin jireenya dubartii kanaa miidhe